Sunday, 17 Jan 2021 00:00 am
Waldaan Gargaarsaa Ifaa dargaggoo fi weellisaa Ifaa Taliilaa hundaa'ee yeroo ammaa barattoota harkaa qalleeyyi ijoollee 105 dhabbiidhaan barsiisaa jiraachuu ibse.
Kaayyoo Waldaa Gargaarsaa Ifaa
Waldaan gargaarsaa Ifaa daa'imman harka qalleeyyi barachuu hin dandeenye cina dhaabbachuun, meeshaalee barnootaa deeggaruun akka baratan taasisuu fi Maanguddoota keenya humnaa fi namoota isaan deeggaru hin qabne waantota isaan barbaachisuun deeggaruudha.
Waldichi yeroo amma miseensota tola ooltota 12 ta'an kan qabu fi yeroo ammas qaama motummaa dhimmichi ilaallatu irra beekkamtii argachuun Biiroo isaa magaalaa Adaamaatti banuun socho’aa jiraachuu dargaggoo Ifaa Taliilaa Gadaa Magazine'tti hime.
"Waldaan gargaarsaa Ifaa yeroo ammaa galii ofiisaaf maddisiisu hin qabu, garuu lammiilee keenya laphee namaaf nahu qaban biyya keessaaf biyya alaa jiraatan irraa qarshii, meeshaalee barnoota, uffataa, zaayitaa, daakuu fi kkf walitti qabuun deeggaraa jira." jedhu dargaggoon kun.
Waldaan gargaarsaa Ifaa yeroo amma barattoota 105 dhaabbiin barsiisaa akka jiru fi maanguddoota 36 bakka jiranitti deeggaraa jiraachuu akkasumas ijoollee daandiirra jiraatanii fi namoota rakkataanif daara baasuun deeggara jiraachuu Hogganaan Waldicha Ifaan ibseera.
Garaa fuuladuraatti Waldaan Gargaarsaa Ifaa naannoo Oromiyaa magaalota garaagaraatti damee isaa babal'suun daa'imman harka qalleeyyi barsiisuu fi maanguddoota deeggaruuf karoora bal'aa qabaate socho’aa jiraachuus himameera.